एक millstone के हो? विस्तृत विश्लेषण
लेख जो तपाईं उपकरण आवश्यक एक millstone कि भन्छिन् र यो हाम्रो समय मा लागू कि।
कृषि पुरातन समयका देखि मान्छे चिनिएको छ। हाम्रा पुर्खाहरूले चाँडै बुझे - यसको जंगली मार सन्तुष्ट भन्दा धेरै लाभदायक छ कि गहुँ बढ्न। निस्सन्देह, तिनीहरूले किनभने कृषि implies, यो एक पटक होइन आए आसीन।
किनभने उनीहरू कार्बोहाइड्रेट समावेश गहुँ र यसको नातेदार उपयोगी छन्, र प्रोटिनको पर्याप्त रकम, र यो आफ्नो पोषण मूल्य कारण छ। निस्सन्देह, लामो समय गहुँ वा कच्चा वा धमाकेदार फारम खाने, तर केही बिन्दुमा, समानता millstones को मदद संग, पीठो यसलाई प्राप्त भएको थियो। त्यसैले एक millstone के छ, र तिनीहरूले अब प्रयोग गरिन्छ कि? यो हामी बुझ्न पर्छ।
द इन्साइक्लोपीडिया अनुसार, millstones - एक अर्ध-पृथक पत्थर सर्कल, अन्न भरिएको छ जो। र यो rotates गर्दा उत्तरार्द्ध पीठो मा milled छ। तिनीहरूले काठ सहित गर्न सकिन्छ, तर पीस प्रक्रिया सुविधा अन्य कठिन सामाग्री वा धातु बनेको आवेषण संग।
पेशी शक्ति, र पीठो निर्माण प्रक्रिया द्वारा संचालित यस millstones पहिलो लामो र अरोचक थियो। त्यसैले अब हामी कस्तो millstone थाहा छ। पछि, बढाउने र प्रक्रिया डिजाइन थिए सुविधा बेल्ट ड्राइव र ठूलो मिल्स पीठो मा अनाज को एक धेरै ठूलो रकम गर्न सक्नुहुन्छ कि। त्यसैले अब हामी कस्तो millstone थाहा छ।
मिल्स धेरै फरक, हावा, जहाँ millstones मस्यौदा जनावर वा विशेष कार्यकर्ता द्वारा संचालित थिए पानी र यांत्रिक, हुन सक्छ।
पवन फारमहरु हावा अक्सर उड्ने छ जहाँ उच्च जमीन, मा निर्मित थिए। र पानी - छिटो र बलियो धाराहरु संग नदी। काम मौसम अवस्था निर्भर गर्दैन रूपमा यो विधि थप फलदायी थियो, र पनि हिउँदमा, मान्छे काट्न पानी पाङ्ग्रा एक बरफ सार्न जारी छ। घोडा, साँढेको र अरूलाई पनि, एक millstone, यो जनावर द्वारा संचालित डिजाइन, उल्लेख लायक छ के को प्रश्न केलाउँदा।
अब millstones, जस्तै, शायद, विशेष ड्रम मा milled एक औद्योगिक मात्रा पीठो प्रयोग। यद्यपि, यस्तो उपकरणहरू जहाँ त्यहाँ धेरै weakly विकास कुनै बिजुली वा प्रविधि संसारको केही टाढाको भागमा पाउन सकिन्छ।
मकै, राई, जौ, आदि - बाटो गरेर, millstones गहुँ देखि पीठो उत्पादन गर्न मात्र प्रयोग गरिन्छ, यो धेरै अनाज देखि निर्मित गर्न सकिन्छ
यो उपकरणको शब्द र उपकरण: अब हामी एक millstone छ थाहा छ।
सुल्तान - शासक र रक्षक
ड्राई स्याम्पु Syoss: उपभोक्ता समीक्षा